ပြိုင်တူပြီးလျှင် – မြန်မာသတင်းစုံ
အေး…ဟုတ်တယ်…..ငါလဲကြားဖူးတယ်…..စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းအုံး ခုပြီး လုပ်မှအားရဆိုဘဲ….ခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်တော့ သားအိမ်ဝက မြင့်တက်လာပြီး လီးထိပ်နဲ့ဆောင့်မိတော့ ပိုကောင်းဆိုဘဲကွ….” တူးတူးက သူကြားဖူးသမျှကို အားပါးတရပြောနေစဉ် အောင်ထွန်းက… “….ခေါင်းအုံးခုလိုးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ……မိန်းမတစ်ယောက် စောက်ခေါင်းနက် မနက် ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ…..သူ့ထမီလှန်ပြီး လက်နဲ့ထိုးကြည့်ရမှာလား…” “…..နင့်..အမေကလွားမှဘဲ….လက်နဲ့ထိုးကြည့်လို့ရမလားဟ….ပါးကျိုး ထောင်ကျသွားမှာပေါ့……ခွီးစ် တဲ့မှာဘဲ….တုံးလိုက်တာ….” တူးတူးကအောင်ထွန်းကိုကလော်တုတ်လိုက်သည်။“…..ဒါဖြင့်ရင်….စောက်ခေါင်းနက် မနက်သိဘို့ ပြောလေကွာ…” အောင်ထွန်းက သူ့အမေကို ထိပါးပြီးပြောလာသော တူးတူးကို မကျေမနပ်သံဖြင့် မေးလိုက်၏။ “…..ပြောလိမ့်မပေါ့ကွာ…မင်းကိုက လောနေတဲ့ဥစ္စာ “ ဘာစကားမှ မပြောဘဲငြိမ်နားထောင်နေသော စိုးလွင်က ကြားဝင်ပြောလိုက်သည်။
ငါဖတ်ဖူးတဲ့ ကာမသျှတ္တရ စာအုပ်ထဲမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ပေါ့လေ…. ဖင်ကောက်တဲ့မိန်းမဟာ…စောက်ခေါင်းနက်သတဲ့ကွ……သာမာန်ကိုမဟုတ်ဘဲ… သိသိသာသာကောက်တဲ့မိန်းမပေါ့ကွာ…” “…..အော်….အေး..အေး…ရွာတောင်ပိုင်းက ပဲပြုတ်သည် မရင်မိ လိုပေါ့နော်..” အောင်ထွန်းကလည်း သူ့ဝသီအတိုင်း ဝင်ထောက်ခံသည်။ စိုးလွင်က အောင်ထွန်းကို မကျေမနပ်နှင့် မျက်စောင်းထိုးလိုက်၏။ “….နောက်တစ်ခါကိုမြင့်ကျော်တို့ပြောတာလဲကြားဖူးတယ်ကွ….ချက်နဲ့စောက်ဖုတ်ဟာ သိသိသာသာကြီးသာမာန်ထက်ဝေးကွာနေရင်လဲစောက်ခေါင်းနက်ဆိုဘဲငါတွေးကြည့်တယ်ပေါ့ကွာ…..ဖင်က အဆမတန်ကောက်မှတော့…ချက်နဲ့ စောက်ဖုတ်က အလိုလိုဝေးပြီးပေါ့ကွ…ဒီတော့ သေချာပေါက်ကို စောက်ခေါင်းနက်တဲ့ အမျိုးအစားလို့သိရမှာဘဲ….စောက်ခေါင်းနက်တဲ့မိန်းမရဲ့ယောကျာ်းဟာလီးတိုအမျိုးအစားဆိုရင်တော့ သေချာပြီမောင်ရေ…..ဒီမိန်းမ အားမရလို့ လင်ငယ်နေမှာဘဲ…..”။
တောက်…ဟုတ်လိုက်လေကွာ….တူးတူး….တူးတူးနဲ့ တို့အထဲမှာ ထူးခြားနေတာက ဒီလိုမျိုးဗဟုသုတတွေ နှံ့စပ်လို့ကိုး….စောစောကပြောတဲ့မရင်မိကြီးကလင်ငယ်နေတယ်မောင်….ကိုကျော်ဆွေရယ်ကိုနက်ကြီး..ရယ်..ဦးစံမြင့်ရယ်…. (၃)ယောက်တောင်ဘဲ ခင်မျာ…..” “…..ခွေးမသား….မသိပဲနဲ့ရမ်းပြောနေ…စောက်ပြဿနာတက်နေမယ်….” တူးတူးက ခပ်ချဉ်ချဉ်နှင့် ပြောပြစ်လိုက်သည်။စိုးလွင်ကတော့ ဘာမှမပြော အောင်ထွန်းက အလွန်စောက်မြင်ကပ်စွာမျက်စောင်းထိုးလိုက်သည်။“…အေးမင်းပြောတဲ့ပေတံနဲ့ထောက်ပြီး မှန်းဆကြည့်ရင် မရင်မိယောကျာ်း ကိုသန်းဆွေဟာသေချာပေါက်လီးတိုရမယ်ကွ…တိုရုံတောင်မကဘူး…သေးတောင် သေးချင်မှာ….”အောင်ထွန်းကတော့ မျက်စောင်းထိုးထိုး…..ဆဲဆဲ..သူ့ညဉ်ကိုတော့ လုံးဝမဖျောက်။အခုကြည့် သူပြောချင်ရာကို ဇွတ်ပြောသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဉာဉ်စရိုက်ခြင်း မတူကြသော်လည်း ငယ်ငယ်ကထဲက လည်ပင်းဖက်ကြီးလာသော တစ်ရွာတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် သက်တူ-ရွယ်တူ-အတန်းတူဘဝတူသူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေ မဟုတ်ပါလား။
ဒါနဲ့…နေစမ်းပါအုံး…ကိုကျော်ဆွေ…ကိုနက်ကြီး…ဦးစံမြင့်တို့ သုံးယောက်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ မရင်မိ ဇာတ်လမ်းပြောစမ်းပါအုံး…ဟုတ်ကော ဟုတ်လို့လားကွ…မင်းက သိပ်စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး…” တူးတူးက အောင်ထွန်းကို အရေးတယူမေးလာသည့်အတွက် အောင်ထွန်းတစ်ယောက် ဘဝင်မြင့်သွားသည်။ ဒီကောင်က မြှောက်ပေးရင် ဂွေးပေါ်အောင်ကမည့်လူစား။ ဆဲဆဲဆိုဆို ပြုံးဖြီးဖြီးနေတတ်တဲ့ အကောင်။ အခု သူ့ကို တူးတူးက အရေးတယူ မေးလာသောအခါ သဘောတွေ စွတ်ကျသွား၏။ နွုတ်နည်းသော စိုးလွင်သည်ပင် အောင်ထွန်းစကားကို အလွန်သိချင်ကြားချင် နေကြောင်း သူ့မျက်လုံးတွေက သက်သေခံနေ၏။ “…ဒီလိုကွ…ကိုကျော်ဆွေတို့နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အမေရယ်…မချစ်ရယ်… မနုရယ် သုံးယောက်သား ဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေတာကို ငါကကြားလိုက်ရတာ..အဲဒီနေ့က ငါနေမကောင်းလို့ အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာ…သူတို့သုံးယောက်က သန်းရှာရင်း မရင်မိ စောက်တင်းတွေ ချနေကြတာပေါ့ကွာ…”။
ဟား..ဟား…ဟိုသီချင်းလိုပေါ့နော်…သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပါ… စပ်မိစပ်ရာ…ဘာညာကွိကွ…ဟားဟား အေးအေး လုပ်စမ်းပါအုံး…ဒို့ကလဲ တဆင့် ကွိကွရအောင်…” တူးတူးအပြောကြောင့်စိုးလွင်မျက်နှာကြီးသည်ပင် ပြုံးပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်လာတော့၏။ အားပါးတရ နားထောင်မည့်ဟန်ကအပြည့်။ အောင်ထွန်းက တက်ကြွသော အသံနှင့် သူ့စကားကို ပြန်ဆက်သည်။ “….မရင်မိ အကြောင်းကို သူတွေ့သမျှ ဖောက်သည်ချတာက မနုရယ်….သူပြောတာက ဒီလိုကွ…..” သည်နေ့ ကိုကျော်ဆွေထံမှ ယူထားသော ငွေတစ်သောင်းအတွက် တစ်လပြည့်၍ အတိုးသတ်ရန် မနုထွက်လာသည်။စောစောပေးပြီး အေးတာပဲဟူသော စိတ်ကူးဖြင့်နေ့လည်စာထမင်းစားပြီးထွက်လာသည်။ကိုကျော်ဆွေသည် ရွာထဲက အိမ်တွင်မနေဘဲ ရွာအပြင်ဘက်ရှိ သူပိုင် သရက်ခြံထဲတွင် နေထိုင်၏။သရက်ခြံက ပေနှစ်ရာကျော်ပတ်လည်ရှိ၍ အတော် ကျယ်ဝန်းသည်။အဓိကအားဖြင့် ရင်ကွဲမျိုးသန့်များကို စိုက်ပျိုးထားသည်။
သည်သရက်ခြံကရသောငွေမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် သိန်းချီဝင်သည်။ ဂျုံ-ပဲ-မြေပဲ ပဲစင်းငုံများလှောင်၍ ဈေးကောင်းရမှ ထုတ်ရောင်းသဖြင့် သူ့လက်ဖျားတွင် ငွေသီးနေသည်။တစ်ရွာလုံး သူ့အကြွေးနှင့် ကင်းသူရှားသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က သူ့မိန်းမဆုံးသွားရာ….. နောက်အိမ်ထောင်မပြုတော့ဘဲ မုဆိုးဖိုဘဝနှင့်နေထိုင်လျှက် ရှိသည်။ အသက်က ၄၀ ကျော်ရုံသာရှိပြီ….အရွယ်တင် ကျန်းမာသန်စွမ်း၏။ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် ရသေးသော်လည်း အပိုဒုက္ခမရှာတော့ဘဲအချောင်ရနိုင်သည့်စားကွင်းစားကွက်များနှင့်သာပျော်မွေ့နေသည်သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိရာ သမီးအကြီးက ၂၀ ကျော်၊သားအငယ်က ၁ရ နှစ် ရွာထဲကအိမ်တွင် ကိုကျော်ဆွေ့အမ အပျိုကြီးနှင့် အတူနေကြသည်။ သူကမူ သရက်ခြံထဲတွင် နှစ်စဉ် ၃ ခန်းမြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်၍ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်သည်။ မနုတစ်ယောက် ကိုကျော်ဆွေထံအလာတွင် အိမ်သာတက်ချင်၍ သရက်ခြံ အနောက်ဖက်ကပ်လျှက်ရှိ ချောင်းထဲသွား၍ အိမ်သာတက်သည်။
ကိစ္စဝိစ္စပြီးတော့ ချောင်းဘက်ကတက်လာပြီး သရက်ခြံနောက်ဖေးဘက်က အလွယ်တကူ ဝင်လာခဲ့သည်။နေ့လည်နေ့ခင်းဖြစ်၍ လူသူတိတ်ဆိတ်နေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကိုကျော်ဆွေ မြေစိုက်အိမ်နားရောက်လာသည်။ ဘာရယ် ညာရယ်မဟုတ် မိန်းမပီပီ စပ်စုချင်၍ ကိုကျော်ဆွေ့ အိမ်အတွင်းသို့ ထရံအပေါက်မှ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။သူချောင်းကြည့်သော နေရာက အိမ်နောက်ခန်း။ အခန်းတွင်း မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းက မနုကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေသည်။ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်တွင် မရင်မိနှင့် ကိုကျော်ဆွေတို့ အဝတ်အစားမပါဗလာကိုယ်တုံးလုံးကြီးနှင့်ကာမဇာတ်ခင်းနေကြသည်။ မရင်မိက ခါးအောက်တွင် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးခုထားပြီး ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားဖြင့် ခံလျှက်ရှိပြီး………. ကိုကျော်ဆွေက ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဒူးထောက်ထိုင်ကာ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို မရင်မိ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျော်ခွပြီး ကုန်း၍ ကုန်း၍ ဆောင့်လိုးနေသည်။ ကိုကျော်ဆွေ၏ ဆောင့်ချက်တွေက မာန်ပါပြင်းထန်လှသည်။
မရင်မိ ကလည်း ကိုကျော်ဆွေ၏ခါးကို တင်းနေအောင်ဖက်လျှက် ဖင်ဆုံကြီးကို ပင့်ထိုး မြှောက်ကော့လျှက် အားရပါးရခံနေသည်။ “…ဖွတ်…ဖွတ်…ဖွပ်…ဘွတ်….” “….ဖွတ်….ဖွတ်…ဖွပ်….ဘွတ်….” “….အမေ့….အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ ကိုကျော်ဆွေရဲ့…အင့်…ရှီး ကျွတ်.. ကျွတ် လိုးပါ…ဆောင့်ဆောင့်လိုးစမ်းပါ…” သည်မျှအထိ ဆောင့်လိုးနေတာတောင် ဆောင့်ခိုင်းပုံထောက်၍ မရင်မိ ကာမရာဂ စိတ်တွေ မည်မျှထကြွသောင်းကြမ်းနေကြောင်း သိသာလွန်းလှသည်။ တောသူဆိုသော်လည်း မရင်မိ အသားအရည်တွေက တရုတ်မတစ်ယောက်လို အလားနီးစပ်သူဖြစ်၏။ရင်၊တင်၊အသားအရောင်….ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ကြည့်သောအားဖြင့် တဏှာရာဂ အလွန်ကြီးမားသော ဟတ္ထနီအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကိုကျော်ဆွေက လက်နှစ်ဖက်ထောက်၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရာမှဘယ်လက်ကိုရုတ်လိုက်ပြီးမရင်မိနို့အုံဖွေးဖွေးမို့မို့တင်းတင်းကြီးပေါ်အုပ်တင်လိုက်လျှက်ပွတ်ချေလူးလှိမ့်လိုက်သည်။
ထိရဲ့လား….ရင်မိ…အား…အမေ့….အင်း….ထိ…ထိတယ်…..ကိုကျော်ဆွေရဲ့….အီး..ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာရှင်…..” စောက်ဖုတ်ကြီး….လီးကြီးတွေမို့လားမသိ….ဖွတ်…ဖတ်…ဘွတ်… ဟူသော အသံကြီး တွေက ကြက်သီးထအသဲယားစရာ ကောင်းလွန်းလှပါသည်။မနုတစ်ယောက် ချောင်းကြည့်နေရင်းကပင်စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး ပုရွက်ဆိတ်အကောင်တစ်ရာ တက်လာသလို တရွရွနှင့် ထကြွလာသည်။ ရင်တွေပူ အာခေါင်တွေ ချောက်လာသဖြင့် တံတွေးကို မကြာခဏ မျိုချနေရ၏လည်ပင်းကြောကြီးတွေထောင်ကာ သူကလည်း အသည်းအသန် ချောင်းကြည့်နေ၏ ကိုကျော်ဆွေ ဖင်ကြောကြီးတွေက ကျုံ့ဝင်ရွုံ့ခွက်နေပြီး ခပ်သွက်သွက်ကြီး ကပ်ညှောင့်နေသည်။ “….ဖွတ်…ရွတ်…ဖွစ်…ဖွတ်….” “….အား….အမလေး….ထိ….ထိလိုက်တာရှင်….သားအိမ်ဝကို ပူရှိန်းကျဉ်ဆိမ့်နေတာဘဲ အ…ဟ….ဟင့်…အမေ့…အမလေး….အေ့…..စောက်စိပါထိသတော့….အားလားလား… အီးအီးရှီး…အ……” မရင်မိတကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်လျှက် ကိုကျော်ဆွေခါးကြီးကို တင်းကျပ် နေအောင် ဖက်ထားသည်။
ကိုကျော်ဆွေ့ လက်နှစ်ဖက်က အနည်းငယ်တုတ်သယောင်ယောင်ရှိသော ရင်မိခါးကို ဆုတ်ကိုင်လျှက် ခေါင်းမော့ကိုယ်မတ်ကာ သူ့လီးကြီးကို အဆုံးထိ ဖိကပ်ထားလိုက်ပြီး လရေတွေကို ပန်းထည့်နေသည်။သူ့ကိုယ်လုံးကြီးလည်း ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်တုန်သွား၏။ အခြေအနေအချိန်အခါ သိသူပီပီကိုကျော်ဆွေကသူ့လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျှက်အညိုရောင်သမ်းနေသောလီးတုတ်ရှည်ကြီးကမကျေနပ်သောဟန်နှင့်မာန်ဟုန်မပြေသေးသည့် အမူအယာကိုပြနေသေး၏။ မနုတစ်ယောက်​ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ထိ ကြည့်ချင်လွန်းလှသော်လည်း အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် စောစောက သူမ ချီးပါခဲ့ရာ ချောင်းထဲသို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ လီးအတွေ့အကြုံနောကျေထားပြီးဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည် မိန်းမပင် ဖြစ်လင့်ကစား ကိုကျော်ဆွေ့ လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ဖင်ယားအဖုတ်တောင် ရမ္မက်သွေးတွေ ပူလောင်ဆူပွက်ခဲ့ရ၏။
မင်းဇာတ်လမ်းက ကောင်းလွန်းလို့ မျက်လုံးထဲမှာ ကွင်းကနဲ…ကွက်ကနဲကို မြင်လာတော့တာပဲကွာ…ငါတောင် မရင်မိကြီးကို ချချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာပြီ…” “…အလကားတော့ မရလောက်ဘူး ကိုယ့်လူ…ငွေချေးနိုင်မှ… ဒါမှ အတိုးမယူဘဲ လိုးလွတ်လို့ရမှာပေါ့ကွ….” အောင်ထွန်းက သူ့ထင်မြင်ချက်ကို ခပ်ဆဆလေး ပြောလိုက်၏။ “….တဏှာကြီးတဲ့မိန်းမအဖို့ ငွေကပဓာန မဟုတ်ပါဘူးကွာ…လီးက အဓိကပါ..” အခု ဝင်ပြောသူက စိုးလွင်…စိုးလွင်က သည်ပွဲတွင် သူ့ဉာဉ်အတိုင်း ဘာမှဝင်မပြောဘဲ အသာနားထောင်ခဲ့သည်။သည်လိုလူမျိုးက အပြောသမားမဟုတ် လက်တွေ့လုပ်မည့် သူမျိုး။နောက်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်စိတ်ချသောဟန်အပြည့်နှင့် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ “…..အေး….ဒါလဲ …..ဟုတ်ပါရဲ့….” စိုးလွင်စကားကို တိုးတိုးက ထောက်ခံလိုက်၏။ “…ဘယ်လောက်ပဲ တဏှာကြီးကြီး အညှာကိုင်တတ်ရင် အရည်တောင် ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်ကွာ…”တိုးတိုးက စိုးလွင်စကားကိုပင် သေချာအောင်ထပ်ဆင့်၍ ထောက်ခံပြောလိုက်သည်။
လုပ်ပါအုံး…တိုးတိုးရ….အညှာဆိုတာ ဘာတုံးဟ…ထုံးစံအတိုင်း အောင်ထွန်းက သိချင်ဇောနှင့်အမောတကော မေးလိုက်၏။ သည်တခါတော့ စိုးလွင်က သူ့ကို မျက်စောင်း မထိုးတော့ပါ…အူကြောင်ကြောင် မြောက်ကြွကြွသူငယ်ချင်းကို ပြုံးလျှက်သာ ကြည့်လိုက်ပါတော့သည်။ “…..အညှာဆိုတာ စောက်စိပေါ့ကွာ….စောက်စိကလိတတ်ရင်…ကာမမီးတွေ ပွင့်ထွက်ပြီး ဘယ်မိန်းမခံနိုင်မှာလဲ…ဒါပေမဲ့ မရင်မိလိုဟာကြီးကတော့ အထွေအထူး တောင် ကလိစရာလိုမှာမဟုတ်ဘူး…လီးကြီးဖို့နဲ့ခပ်ကြာကြာအလိုးသန်ဘို့ဘဲလိုမှာ.. မင်းက ဒီမိန်းမကြီးကို…ဖြိုနိုင်လို့လား….” တိုးတိုးက အောင်ထွန်းကို အဓိကဦးတည်ပြီး မေးငေါ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိုးလွင်ကလည်း ဘယ့်နှယ့်လဲဟူသော အမူအရာနှင့် အောင်ထွန်းကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ စကားပေါ နွုတ်သွက်သော အောင်ထွန်းတစ်ယောက် အသံတိတ် နွုတ်ဆိတ်ရင်း ခေတ္တတွေးနေသည်။ “…..အင်း…မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်….တိုးတိုးရေ…အလိုးသန်တယ်ပဲ ထားအုံး…။
ကိုယ့်ဒင်က စံချိန်မှီရုံပဲ..ရှိတယ်လေ….ဒီတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို အယားဖျောက် ပေးသလောက်ပဲရှိမှာပေါ့…ဟီး…ဟီး…..အေး…မင်း မဆိုးဘူး….ကိုယ့်ပမာဏကို သိတယ်…”စိုးလွင်က အောင်ထွန်းစကားကို ဝင်ထောက်ခံလိုက်၏။အောင်ထွန်းက သူ့ကို သရော်သည်ထင်၍ ဘုကြည့်ကြည့်နေစဉ် တိုးတိုးကဝင်၍… “…..စိုးလွင် ပြောတာအမှန်ပဲ အောင်ထွန်းရ….မင်းက သူ့ကို တလွဲမထင်နဲ့….မင်း မပြောနဲ့…ငါလဲ မရင်မိကို မဖြိုနိုင်ဘူးမောင်….တကယ်ပြောတာ သူ့အသားအရေကြည့် အသားနီစပ်…ဖင်ဆုံကြီးကလဲ..နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး…ပြီးတော့ နောက်ကောက်ထွက် နေတာလဲအထင်အရှားလိုးတော့လိုးချင်စရာကြီးပေါ့ကွာ….ဟား ဟား…ဒါပေမဲ့ ဟတ္ထနီရဲ့ သဘာဝက အလိုးလဲကြမ်း…လီးလဲကြီးမှ…ကျေနပ်တာဘဲကွ… ဒီတော့ မနိုင်ဝန်သွားထမ်းရင် မင်းတို့ငါတို့ဘဲ ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျသွားမှာပေါ့ဟ…” “….အင်း ဒီလိုဆို…..သူ့ကိုဖြိုနိုင်တာ ကိုကျော်ဆွေဘဲ နေမှာပေါ့နော်…” “…..လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ထဲမှာတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေ့….မင်းတို့ငါတို့ တက်ခေတ်လူတွေထဲမှာ……။
လောလောဆယ်..ဒ်ီမိန်းမကြီးကို အပြတ်ဖြိုနိုင်မှာကတော့.. ဟောဒီ စိုးလွင်ဘဲ မောင်ရင်….” “…..ဟာ…ဟုတ်ပါ့မလားကွာ…” “….မင်းကဲ…ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအကြောင်း…သိရက်သားနဲ့…ဒီကောင့်လော်က ငယ်ငယ်ကထဲက ဒို့ထက်ကြီးတယ်လေ…သူကလက်တွေ့သမား…အခြေခံ စံချိန်မှီ လီးကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးနေတာ…အခုဆိုရင် စံချိန်တောင် အတော်လွန် နေပြီ….ပြီးတော့ မင်းတို့ ငါတို့ထက် လူကောင်ကထွားပြီးတောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တယ်လေ လက်လှဲရင်…..ဒို့….သူ့ကို ဘယ်တုံးကနိုင်ဘူးလို့လဲ….” “….အေး…အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ်…ဒါပေမဲ့…ဒီကောင့်ဒုတ်ကြီး စံချိန်လွန် ဖြစ်သွားတာတော့ တကယ်မသိဘူးကွ…” “….သူငယ်ချင်း….သေချာသွားအောင် ပြလိုက်စမ်းပါကွာ…” တိုးတိုးက စိုးလွင်ကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ စိုးလွင်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ပုဆိုးကို ခပ်ဟဟ လှန်ပြလိုက်သည်။ အားပါးပါး…..နည်းတဲ့လီးကြီး မဟုတ်ပါလား… အတုတ်က ရုပ်ပျိုဆေးဗူးခန့်ရှိပြီး အရှည်က ရှစ်လက်မခန့်ရှိမည်။
လီးကြီးက အောက်ခြေတွင်ကွပ်ပြစ်ကြီးပေါ်တွင် ခေါင်စင်းစင်းကြီးလဲလျောင်း တွဲလဲကျနေ၏။ ဒစ်လည်းမပြဲသေး….ထိပ်ဖူးချွန်ကြီးနှင့်ဖြစ်၏။လီးကြီးက အဝါဘက်လုသော အညိုရောင်ဖြစ်၏။စိုးလွင်က ပြန်ဖုံးပြီး ထိုင်လိုက်သည်။သူ့မျက်နှာမှာလည်း ပန်းနုရောင် ပြေး၍ ပြုံးရောင်သန်းနေသည်။ “….အေး…ဟုတ်ပါပြီ…..မရင်မိ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြိုနိုင်မဲ့လီးကြီးဆိုတာ ယုံပါပြီကွာ ဟား..ဟား…ဟား….” အောင်ထွန်းက သူငယ်ချင်းအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်စွာ ပြောလိုက်သည်။တိုးတိုး ကလည်း အောင်ထွန်းစကားကို ဖြည့်စွက်ထောက်ခံ၏။ “……အခုချိန်မှာတော့ မရင်မိရဲ့စောက်ဖုတ်သရဖူကြီးကို ချန်ပီယံ ကိုကျော်ဆွေကပိုင်ချင်ပိုင်ထားမှာပေါ့ကွာ….ဒါပေမဲ့ ဒီစောက်ဖုတ်သရဖူကြီးကို ပြိုင်လုမဲ့ ပြိုင်ဘက်ချန်ပီယံစိုးလွင်ရှိနေပြီလေ….ပြီးတော့ဟိုကလေးဆယ်ကျော်ကျလူပါ….ဒို့ကောင်က အားကောင်းမောင်းသန် ပျိုရွယ်ဟန် အပြည့်ရှိတဲ့ (၁၈)နှစ်ကျော် လူပျိုသိုးပဲကွ…..ဟား ဟား…ဟား…” “…..ဟာ….ဒီလိုဆို…ဟုတ်ပီကွ….”။
တိုးတိုးစကားနှင့် ရယ်သံအဆုံးတွင် အောင်ထွန်းအလန့်တကြားထအော်ပါတော့သည်။“….ဟ..ဘာလဲဟ….လခွီးတဲ့မှဘဲ….မင်းဟာက အလန့်တကြားကွာ…” စိုးလွင်က အောင်ထွန်းကို ထကြိမ်းသည်။အရယ်အမောအရှိန်ကြောင့်သာ။အောင်ထွန်း ထအော်လိုက်ပုံက တိုးတိုးသည်ပင် လန့်သွား၍ ထောင်းကနဲ ဒေါခီးသွားမိသည်။ “….ဒီလို…ဒီလို…ငါ့စိတ်ကူးက ဒီလို…မရင်မိကို ကိုကျော်ဆွေနဲ့ စိုးလွင်တို့ ပြိုင်လိုးကြမယ်ကွာ….လောင်းကြေးကို သိန်းချီတင်မယ်လေ…” “….အေး..ကောင်းတယ်…” အောင်ထွန်း တင်ပြချက်ကို တိုးတိုးက ထောက်ခံ၏။တိုးတိုးက တဆက်တည်း စိုးလွင် ဘက်ကိုလှည့်၍ “…..ဘယ်နှယ့်လဲ….ဟေ့ကောင်….” “….လုပ်လိုက်လေ….ကြာသလားလို့….” ကိုကျော်ဆွေနှင့် အကျေအလည်ညှိပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန် ရက်သတ်မှတ်သည်။ မရင်မိနှင့်ညှိရန် ကိုကျော်ဆွေကို သဘောတူ တာဝန်ပေးကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သတ်မှတ်ရက်တွင် ပြိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်းပ၏။
ကိုကျော်ဆွေ-တူးတူး-အောင်ထွန်း+စိုးလွင် တို့သည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်၏။ ပထမအချီတွင် အနွုးအနှပ်မပါဘဲ တစ်နာရီခွဲဆက်တိုက်လိုးရမည်။ ကြိုက်သလို ပုံစံနှင့်လိုးနိုင်သည်။လိုးခွင့်ရှိသည်။အလိုးခံသူက တော်ပါတော့ဟုဆိုမှ ပွဲရပ်မည်။ ဒုတိယအချီတွင် အနွုးအနှပ် အနွိုက်အဆွ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်သည်။ အချိန်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ။သို့သော် ၂ နာရီထက်ကျော်လျှင် အရွုံးဟု သတ်မှတ်သည်။ မိန်းမကိုယ်တိုင်က တော်ပါပြီဟု အလေးအနက်အဆိုပြုလာမှ ပွဲရပ်မည်။အလိုးခံမည့်သူသည် နောက်တစ်ရက်ဆက်တိုက်ခံနိုင်လျှင် အရွုံး။မခံနိုင်လောက် အောင်ပျော့ခွေချိနဲ့၍ မလုပ်ပါသေးနှင့်ဦးဟု တောင်းပန်ပါက အနိုင်။ ဤအရွုံးအနိုင်သတ်မှတ်ချက်သည် အလိုးခံသူမိန်းမနှင့် မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။ ပြိုင်ပွဲမစမီ ရက်များတွင် စားဆေး-လိမ်းဆေး ကြိုက်ရာသုံးနိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲစမည့်နေ့တွင်မူ မည်သည့်အရာမှ မသုံးစွဲရ…အထူးသဖြင့်လိမ်းဆေးလုံးဝမသုံးရ။ မိမိကိုယ်ကို ယောကျာ်းပီသသူဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံကြည်လျှင် လိမ်းဆေးလုံးဝ မသုံးသင့်ကြောင်း အထူးသတိပြုပါ။
လောင်းကြေးငွေကို သုံးသိန်းခွဲစီ သတ်မှတ်သည်။နိုင်သူက မရင်မိကို တစ်သိန်းတိတိပေးရမည်။ထိုနေ့က သူတို့လေးယောက် ည ၁၁ နာရီခွဲကျော်မှ စည်းမျဉ်းရေးဆွဲပြီးကြသည်။ ကိုကျော်ဆွေက သူ့ကိုယ်သူအပိုင်တွက်၍ အကယ်၍ သူရွုံးခဲ့လျှင် ဟောဒီ သရက်ခြံကြီးတဝက်ပါ ထပ်လောင်း၍ ပေးဦးမည်ဟု ပြော၏။ထိုအချက်ကိုလည်း စည်းမျဉ်းထဲတွင် နောက်တိုးအဖြစ် ဖြည့်စွက်လိုက်သည်။ အကယ်၍ သူနိုင်ခဲ့လျှင် မင်းတို့(၃)ယောက်ရဲ့ အမေတွေကို (၃)ညစီ လိုးရလိမ့်မည်။မင်းတို့ကိုယ်တိုင် ခေါ်ခဲ့ရမည်ဟု အဆိုပြုသည်။ သုံးယောက်သား ခေါင်းခြင်းရိုက်၍ သဘောတူလိုက်ကြသည်။ မတတ်နိုင် သူ့ဘက်ကလည်း ရက်ရောသည်မဟုတ်လား။ “နေအုံးဗျ…..ခင်များအဆိုကို ကျုပ်တို့မကန့်ကွက်ပါဘူး….ဒါပေမဲ့ ခင်များပြောတဲ့ မိန်းမသုံးယောက်က ကျုပ်တို့ရဲ့အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တို့မှာ ဂိုဏ်းသင့်နိုင်တယ်…….ဒီတော့ သရက်ခြံ တဝက်မလုပ်ပါနဲ့.. သရက်တစ်ခြံလုံးလုပ်လိုက်ပါ….” ဤစကားကို စိုးလွင်က ဝင်ပြောခြင်းဖြစ်၏။
တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့မှာခေါင်းတွေပူထူနေသဖြင့် ဘာမှ စဉ်းစားလို့အကြံမရ…သူတို့အမေတွေကိုထိပါးမည့်အရေးကြုံလာတော့ ခြောက်ခြားတုန်လွုပ်သွားကြသည်။ စကားနည်းလှသော စိုးလွင်ကသာ ထောက်ပြအဆိုပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကျော်ဆွေက မည်သို့မှ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ……….. “….အေး….စိမ်လိုက်ကွာ…..တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်….အဲဒီနေ့ကျ ငါအရင်ဖိုက်မှာ…” “….ကျေနပ်ပါတယ်……” စိုးလွင်ကပင် အတည်ပြုထောက်ခံလိုက်သည်။ ဒီနေ့…..ကိုကျော်ဆွေ စတင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရမည်နေ့ မရင်မိတစ်ယောက် ရေမိုးချိုး သနပ်ခါး လိမ်း၍ ခါတိုင်းလိုပင် ပဲပြုတ်ရောင်းထွက်သည်။ ခါတိုင်းလည်း လူသူမကွဲမှီ ဝေလီဝေလင်း အနောက်ဖက်ရွာသို့ ပထမ ရောင်းလေ့ရှိသည်။ အနောက်ဖက်ရွာရောင်းမကုန်မှ ရွာထဲလိုက်ရောင်းသည်။အနည်းဆုံး ၉ နာရီကျော်မှသာ အိမ်ပြန် ရောက်လေ့ရှိသည်။ အနည်းဆုံး သူဈေးရောင်းချိန် ၃ နာရီကျော် ပုံမှန်ကြာလေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကား ကလေးလူကြီးပါမကျန် တရွာလုံးသိနေသော မရင်မိဈေးရောင်းချိန် ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကိုတမင်ရွေးလိုက်ကြသည်။
သည်တော့မည်သူမှမသိနိုင်မရိပ်မိနိုင်တော့… စောစောကမူ အချိန်ရွေးဘို့အတွက် အခက်တွေ့နေကြရာ သည်အကြံကို စိုးလွင်က ပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေ ပြေလည်သွားတော့၏။ ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် သူ့ပြိုင်ဘက်စိုးလွင်ကို လျှော့မတွက် သာတော့……သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ သိပ်အထင်ကြီးနေ၍ နွားပျိုသန်လှ…. နွားအိုပေါင်ကျိုးဟူသော စကားပုံကို အသေစွဲကိုင်ထား၍ သိပ်တော့မဖြုံလှပါ။ လူလုံးမကွဲခင်မှာပင် မရင်မိတစ်ယောက် ပဲပြုတ်တောင်းလေးခေါင်းပေါ် ရွက်၍ သရက်ခြံအနောက်ဘက်ချောင်းထဲမှ ဝင်လာသည်​မကြာခင်လုပ်ငန်းစပါတော့သည်။ တိုးတိုးတို့ ၃ ယောက်က သီးသန့် လုပ်ထားသောနေရာမှ ကြည့်နေကြသည်။ဤနေရာကို မရင်မိ မသိအောင် ဝှက်ထားကြ သည်။သိလျှင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ဖီလင်မလာမှစိုး၍ ဖြစ်၏။ မရင်မိက သူ့ကိုပေါ်က အဝတ်အစားများကိုတခုခြင်းချွတ်သည်သူ့ကိုယ်မှာဖုံးထားသောအရာဟူ၍ထမီပါးပါးတထည်…..အပေါ်အကျီင်္လက်တိုတထည်နို့အုံပင်လုံအောင်မဖုံးနိုင်သောဘရာစီယာခပ်သေးသေးတစ်ထည်သည်သာ….။
ထို့ကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ကမ္ဘာဦးလူမကဲ့သို့ တုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ အခန်းထဲတွင် ပုံစံမျိုးစုံလုပ်နိုင်ရန် ၂ ပေခွဲအမြင့် စားပွဲခုံရှည်…. နောက်မှီ ခုံရှည်အလတ်စားတစ်လုံးအဆင်သင့်ချထား၏။တိုးတိုးတို့သုံးယောက်ကို အလယ်ခန်း အထက်စီးမှကြည့်နိုင်ရန်လျှို့ဝှက်စီစဉ်ပေးထား၏။စိုးလွင်ကမူ ပြိုင်ဘက်မင်းသားဖြစ်၍ အပြင်ဘက်မှာသာနေပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကိုကျော်ဆွေက မရင်မိကို ခုတင်ဘောင်တန်းပေါ် လက်ထောက်ပြီး ရှေ့သို့ ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။သူက နောက်မှနေ၍ သူ့လီးတုန်ကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ တစ်ရစ်ချင်းဖိသွင်းလိုက်သည်ချောင်းကြည့်နေသော တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့ မျက်လုံးပြူးသွားကြ၏။ ကိုကျော်ဆွေ လီးကြီးက နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်။လီးချောင်းကြီးက နက်မှောင်နေပြီး သွေးကြော ဖုကြီးတွေ ယှက်သမ်းနေသည်။စိုးလွင် လီးနှင့်မတိမ်းမယိမ်းပင်………ဒစ်ပြဲ အသားဆိုင်ကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်…သံခမောက်ကြီးလို ဝင်းပြောင်နေ၏။
သမ္ဘာရင်…ဝါရင့်ဆရာကြီးလည်းဖြစ်…လီးကြီးကလည်း စိုးလွင်နှင့် မတိမ်းမယိမ်းမို့ တိုးတိုးနှစ်ယောက် ရင်ခုံနေသည်ဖီလင်တက်စရာအလွန်ကောင်းသော မရင်မိကိုယ်လုံးကြီးကို မြင်နေရလျှက်ကပင် ဖီးလ်မကြွနိုင်ဘဲ ရင်တမမဖြစ်နေကြသည်။ သူတို့ရွုံးခဲ့လျှင် သူတို့အမေများကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကိုကျော်ဆွေထံ ဆက်သရမည်ကို တွေးမိတိုင်း စိတ်တွေချောက်ခြားနေ၏။သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆပ်ဆော့မိသည့် အမှားမို့ နောင်တစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ စောစောကပင် ခံချင်စိတ်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီး တအုံလုံးကြွရွနေပြီး စောက်ရေတွေကလည်း ထွက်နှင့်ပြီးသားမို့ လီးကြီးက ထစ်ငေါ့ ထစ်ငေါ့နှင့် အဆုံးထိ ဝင်သွားသည်။ သည်လီးကြီးကို ခံဘူးထားသော်လည်း စံချိန်လွန်လီးမဟာကြီးမို့ မရင်မိ တစ်ယောက် တစ်ထစ်ခြင်း တစ်ထစ်ခြင်းတိုးဝင်လာသော လီးကြီးကို မျက်လုံးမှိတ် အံကြိတ်ရင်းခံနေရှာသည်။တစ်ချက်တစ်ချက် ဖင်ဆုံကြီးတွေ ကော့တက်သွား၏။ ကိုကျော်ဆွေက ခါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်၍ ခပ်ပြင်းပြင်းပင် ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။
ပထမဆောင့်သောအချိန်ကို စတင်သတ်မှတ်သည်မို့ တစ်ဖက်နံရံရှိတိုင်ကပ်နာရီကို ကြည့်လိုက်သည်။ (၆)နာရီမတ်တင်း….။ “……ဖွပ်…ရွတ်…ဖွတ်….ရွတ်….ဖွတ်…..” “….အင့်….အမေ့…အီး…အား….ဟား… ဟင်း….အင့်..အင်း…အ….အား…” ခပ်သွက်သွက် ခပ်မှန်မှန်ကြီးဆောင့်လိုးလာရာ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှကျော်လာပြီခါတိုင်းဆိုလျှင်ပြီးလိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းမပြီးရဲသေး….အဝင်အထွက်မှန်လာပြီးလီးကြီးနှင့်စောက်ဖုတ်ကြီးတို့ သဟဇာတဖြစ်သွားပြီမို့ မရင်မိလည်း တစတစ ကောင်းကောင်းလာကာဇိမ်နှင့်ခံနေတော့သည်။ နာရီဝက်လောက်ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို ပြွတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။လချောင်းမဲကြီးမှာ စောက်ရေတွေနှင့် ပို၍ပြောင်လက် တင်းတောင်နေတော့သည်။ မရင်မိက မတ်တပ်ရပ်ကာ ကိုကျော်ဆွေကိုကြည့်၍ မေးငေါ့ပြသည်။ ဘယ်လိုပုံစံနှင့်ခံရမလဲဟူသော သဘောဖြစ်သည်။ကိုကျော်ဆွေက ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်သိပ်လိုက်ပြီး မရင်မိတံကောက်ကွေးနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ် မတင် လိုက်သည်။
အံကျဖြစ်မဖြစ် သူ့လီးနှင့်ချိန်ကြည့်ရာ စောက်ဖုတ်အဝက အောက်သို့ တော်တော်လေးရောက်နေသည်မို့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးဆွဲခုပေးလိုက်သည်။ သည်တော့မှ အံကိုက်ဖြစ်သွားသည်။ ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို စောစောကလို ပြန်ထိုးလိုက်သည်။ပေါင်နှစ်လုံးက စိနေသည်မို့ စောက်ဖုတ်က ညပ်နေပြီး ဇွတ်တိုးဝင်လာသော လီးကြီးဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘဲဖြစ်နေသည်။ “……အင့်…အင့်…အ….အမေ့….ရှီး…ကျွတ်….ကျွတ်….နာ…နာတယ်…ကိုဆွေ…” သည်တော့ ကိုကျော်ဆွေက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်မှ ချလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ဘေးသို့ခပ်ကားကားဖြစ်အောင် ဖြဲပေးထားလိုက်သည်။ သည်တော့မှ အသားဆိုင်ထူထူ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပြူးကနဲ ပွင့်အာထွက်လာသည်။ဖြူဝင်းသော ဆီးခုံမို့မို့တစ်ဝိုက်ရှိ စောက်မွေးအုံကြီးမှာ မဲမှောင်နေသည်။အပေါ်စီးမှ အထင်းသားမြင်နေရသော တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့မှာ နှလုံးတုန် ရင်ခုံ အာခေါင်တွေချောက်ပြီး လီးတောင် ကြလာ၏။
ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို ဇွပ်ကနဲ ဗျိကနဲ ဖိသွင်းလိုက်ပြီး အရပ်အဆိုင်းမရှိဘဲ ဒလစပ်ဆောင့်ပါတော့သည်။..ဖွပ်…ဖွတ်….ဖွိ……ဘွတ်….ဖွပ်….ဖွိ…ဖွတ်….ဘွတ်…” ဆောင့်ချက်တွေက အရွယ်နှင့်မမျှအောင် အားပါလှ၏။၁၅ မိနစ်လောက် ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုကျော်ဆွေတယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လရေတွေကို ဗျင်းကနဲ ပန်းထည့်လိုက်တော့၏။ တနာရီပြည့်ရန် ၁၅ မိနစ်သာလိုတော့သည်မို့ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင်တော့..ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် သူ့လရေတွေကို ပန်းထည့်ရင်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အရသာ ယူနေပါသည်။ စည်းကမ်းချက်ကလည်းရှိနေသည်မို့ လီးကြီးကိုအမြန်ချွတ်၍ ပုံစံတမျိုး ပြောင်းရန် အားထုတ်ရပြန်သည်။နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်လိုးပေးရဦးမည်။အသက်က ပြော၍လားမသိ… ကိုကျော်ဆွေလီးကြီးမှာ တော်တော်နှင့်ပြန်မထသေးဘဲ ငေါင်ငေါင်စင်းစင်းကြီး ဖြစ်နေ၏။ ငေါင်စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော လီးကြီးကိုကြည့်၍ တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့ သဘောတွေကျနေသည်။
ကိုကျော်ဆွေက သူ့လီးကြီးကို လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဂွင်းတိုက်ပြစ်လိုက်ရာ လီးကြီးက စောစောကထက်တောင့်တင်းပြန်မတ်လာသည်။မာန်ပြည့်ဟန်ပြည့်ကား မဟုတ်။ စောက်ဖုတ်ထဲကိုပြန်သွင်းထည့်ရာ မဝင်ချင့်ဝင်ချင့်နှင့်ဝင်သွားသည်။ အရင်းကိုမရောက်မှီ ၂ လက်မကျော်လောက် တွန့်ကောက်ပြီးထစ်ခံနေသည်။ ကိုကျော်ဆွေက အဆုံးထိ မသွင်းတော့ဘဲ ဝင်သလောက်နှင့်သာ ခပ်မှန်မှန် ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပေးနေသည်။အားမာန်သွင်း၍ဆောင့်နေရသော်လည်း စောစောကလို မထန်မသွက်တော့။ ၁၅ မိနစ်ကျော်သောအခါ အပြည့်အဝမတောင်ပါဘဲ လီးတခုလုံး ယားကြွလာပြီးလရေတွေထွက်ကုန်ပါတော့သည်။မာမာထန်ထန်သွက်သွက်ဆိုလျှင် မရင်မိလည်း မကြာမှီ ပြီးတော့မည်မှာ သေချာနေ၏။ အခုတော့ ကိုကျော်ဆွေကသာ ပြီးသွားပြီး မရင်မိက မပြီးသေးဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ဟန်လုပ်၍သာ ဆောင့်နေရသော်လည်း လီးကြီးက အဝင်အထွက် မမှန်တော့ တွန့်ခေါက်၍ ထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ကြီး ဖြစ်နေသည်။
တဖက်က ဖီလင်မလာတော့ တွန့်ခေါက်သွားသော လချောင်းတံကြီးက မရင်မိ စောက်ဖုတ်နွုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖိပွတ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေသည်။ အောင့်သက်သက်နှင့်နာကျင်ရုံမှအပ အရသာထူးမတွေ့လှပါ။ မရင်မိက စိတ်ညစ်စွာနှင့် “….ဟို…ဟို….ကိုဆွေ…မရရင်လဲ…မလုပ်နဲ့တော့နာတာပဲရှိတယ်….ဘာအရသာမှ မရှိဘူး……”မရင်မိပြောသောစကားကို တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့က ပီပီသသကြီး ကြားလိုက်ရသည်။သူတို့မျက်နှာတွေ ဝင်းထိန်လင်းလက်သွားသည်။ပထမပွဲစဉ်မှာပင် ကိုကျော်ဆွေကြီး ၉၅ ရာခိုင်နွုန်း ရွုံးနိမ့်သွားပြီ။ သူကြိုတင်စားထားသော အားဆေး စိတ်ကြွဆေးတွေက သူ့ကိုပညာ ကောင်းကောင်းပြနေ၏။ နှလုံးသွေးခုန်နွုန်းတွေ မြန်ဆန်လာပြီး မောဟိုက်လာသည်။မတတ်သာသည့်အဆုံး သူ့လီးကြီးကို ဆွဲနွုတ်လိုက်ပြီး မရင်မိဘေးတွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ကာ အမောဖြေ နေလိုက်သည်။၁ နာရီပြည့်ရန် ၃၀ မိနစ်သာလိုတော့သည်။ “……ရင်မိ…မပြီးသေးဘူးလား…”။
ဟင့်အင်း….ပြီးတော့မလို့ဘဲ…ကိုကျော်ဆွေကမှ ဆက်မလိုးနိုင်ဘဲ…” အခုမှ တိုးတိုးနှင့်အောင်ထွန်းတို့ ဟင်းချနိုင်တော့သည်။စိုးလွင် အကြံပေးချက်အရ ကိုကျော်ဆွေနှင့်မရင်မိတို့ ပြောစကားများကိုကက်ဆက်နှင့်ဖမ်းယူထားပြီးဖြစ်သည်အခြေအနေမဟန်တော့မှန်းသိနေသော ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် သည်အတိုင်းကြီး ပေနေလို့မဖြစ်တော့။သည်စည်းဝိုင်းကထွက်ပြီး ဝီစကီနှင့် စိမ်ထားသော ဖျံသိုဆေးအရက်ကို သောက်မှဖြစ်တော့မည်။ သည်ထဲက မထွက်သမျှ သောက်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်။ကြာလျှင် သည့်ထက်ပိုဆိုးလာမည်။ “….မရင်မိ….ပြီးချင်လား….” ‘….ဟောတော်….ပြီးချင်တာပေါ့လို့….ဈေးရောင်းအပျက်ခံပြီး တော်တို့အလိုးခံမှတော့ မပြီးဘဲမပြန်နိုင်ပါဘူး…..” မရင်မိက စိတ်ပေါက်လာပြီး ဘုဂလန့်ပြောချလိုက်သည်။သည်အသံတွေက ကက်ဆက်ထဲမှာ အကုန်ဝင်နေသည်။သည်မျှဆိုလုံလောက်ပြီမို့ တိုးတိုးက ကက်ဆက် ခလုပ်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်၏။မကြာမှီ ကိုကျော်ဆွေတစ်ယောက် ပုဆိုးနှင့်အကျီ ကောက်ဝတ်ပြီး အခန်းထဲမှထွက်လာသည်။
အခန်းထဲကခုတင်ထက်တွင် အဝတ်အစားကင်းကွာပြီး ဖြူဖွေးဝင်းဝါသော ကိုယ်လုံးကြီးနှင့် ခြေပစ်လက်ပစ် ပက်လက်ကြီးအိပ်လျှက်ရှိသော မရင်မိကို ကြည့်ရင်း အောင်ထွန်းတံတွေးကို ဂွတ်ကနဲမျိုချလိုက်သည်။အခြေအနေမဟန်တော့မှန်းသိသွားသော ကိုကျော်ဆွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကို အချက်ပြပြီး အပြင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။သူ့ခေါင်းထဲမှာ စိုးလွင်ကို အပိုင်ပြန်ချည်နှောင်ဘို့ စီမံကိန်းတွေ တထပ်ကြီးချပြီးသားဖြစ်သွား၏။ အပြင်ဘက်က တန်လျားခုံရှည်ကြီးပေါ်တွင် စိုးလွင်တယောက် အေးအေး ဆေးဆေး နှပ်နေသည်။ “….ကဲ….ငါ့တူ…လေးလေးကတော့ မိနစ်ငါးဆယ်နဲ့တပွဲပြီးသွားပြီ….မင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအနိုင်အရွုံးသတ်မှတ်ရမှာပဲ….အခုတော့ လေးလေး ဆေးသောက်မှ ဖြစ်မှာမို့ငါ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဒီမှာတင်တခန်းရပ်သွားပြီ….ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းထဲမှာ မပါတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကငါသာ၂ချီပြီးသွားတယ်ရင်မိကမပြီးသေးဘူးတဲ့ကွသူကလဲမပြီးရင်မကျေနပ်ဘူးလို့အရေးဆိုလာတယ်….။
ဒါကြောင့်မထင်မှတ်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဒီကဏ္ဍကို မင်းဖြည့်ပေးလိုက်အုံး……” “…ဟုတ်ကဲ့…ရပါတယ်…..လေးလေးဆွေ…” ကိုကျော်ဆွေက ဖျံသိုနှင့်စိမ်ထားသော ဝီစကီတစ်ခွက်ကို ငှဲ့သောက်လိုက်သည်။ သည်တော့မှ အတော်နေသာထိုင်သာ ရှိသွားသည်။ “….ကဲ…စိုးလွင်……..မရင်မိ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါကွာ..”စိုးလွင်မရင်မိရှိရာအခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။“…..ဒီတခါ…အောင်ထွန်းကအပြင်က စောင့်အုံး တိုးတိုးနဲ့ ငါ အခြေအနေ လေ့လာအုံးမယ်…”စိုးလွင် ဝင်လာစဉ် မရင်မိတစ်ယောက် မျက်လုံးမှေးစင်းလျှက် ခြေပစ်လက်ပစ် ကားယားပက်လက်ကြီး အိပ်လျှက်ရှိသည်။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိ မရင်မိစောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ခုံးကြွမို့မောက်နေပြီး နွုတ်ခမ်းသားထူထူများကဘေးသို့အနည်းငယ်လန်ကာ ခပ်ဟဟကြီးပြဲလျှက်ရှိသည်။စိုးလွင် တံတွေးတစ်ချက်မျိုချလိုက်ပြီးမရင်မိတကိုယ်လုံးကို ရာဂကသိုဏ်း ရွုရင်းဖြင့်ပင် သူ့ပုဆိုးနှင့်အကျီင်္ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ မရင်မိက စိုးလွင်မှန်းမသိသေး။
ကိုကျော်ဆွေ ပြန်ဝင်လာသည်ဟု ထင်မှတ်နေ၏။သို့သော သူမဆန္ဒပြည့်ဝအောင်လုပ်မပေးသေးသဖြင့် မကျေနပ်စိတ်တွေ ဝင်ကာ မျက်စိကိုမှိတ်၍ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ စိုးလွင်ကမရင်မိ၏နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးကို လက်ဖဝါးနှင့်ခပ်ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်သည်။စူတင်းနေသည့် နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးကို လက်ညှိုးလက်မနှင့် အသာလေးညှပ်ကာ ခပ်ရွရွလေး ပွတ်ချေပေးသည်။ ထို့နောက် မာန်တုန်ကြွ၍ ခုံးထပွရွနေသောစောက်ဖုတ်အကွဲကြီးအတွင်းသို့ သူ့လက်ညှိုးကို ထိုးသွင်းကာ လွုပ်၍လွုပ်၍ နှဲ့ပေးလိုက်၏။စောက်ရေတွေရော လရေတွေပါ အိုင်ထွန်းစိုရွဲနေသဖြင့်ပြွိပြွိ…..ပြွစ်….ပြွစ်….ပွပ်…ပြလပ်ဟူသော အသံတွေ ထွက်လာသည် စောက်ဖုတ်တစ်အုံလုံး ယားကြွလာပြီး တကိုယ်လုံး မရိုးမရွဖြစ်ကာ မရင်မိတကိုယ်လုံးလူးလွန့်တုန်ခါသွား၏။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကျော်ဆွေမဟုတ်ဘဲ စိုးလွင် ဖြစ်နေ ပါတော့သည်။စိုးလွင်ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲမတ်တောင်နေပါတော့သည်။
လုံးပါတ်ရောအရှည်ပါကိုကျော်ဆွေထက် ရောင်ရောင်လေးကြီးပုံရသည်။ ထူးခြားတာက ကိုကျော်ဆွေ့လီးကြီးက ဒစ်လန်နေပြီး စိုးလွင်လီးက ဒစ်မလန်ဘဲ အရေပြားဖုံးထားသော ဒစ်ထိပ်ဖူးကြီးဖြစ်၏။ပြီးတော့ ညိုဝါရောင်သမ်းပြီး နုထွား လှသော လီးကြီးဖြစ်၏။ မရင်မိက စိုးလွင်ကို ပြုံးရင်း မျက်စိတဖက်မှိတ်ပြသည်။အာရုံအသစ်အဆန်း မို့ မရင်မိစိတ်တွေ မြူးကြွသွက်လက်လာသည်။စောက်ဖုတ်နွိုက်နေသော စိုးလွင် လက်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီးသူမကိုယ်လုံးပေါ်မှောက်ချစေလိုက်သည်။ စိုးလွင်ကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားရင်း ပါးကို နမ်း၏။ “….မမ…က မပြီးသေးဘူးဆို….” “….အင်း….” “…ဒါမို့ ကျွန်တော့်ကို ပွဲသိမ်းပေးဖို့ လေးဆွေက လွတ်လိုက်တာ…” စိုးလွင်က မရင်မိ ဖက်ထားသောလက်များကို အသာဖြေလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဝင်ရပ်လိုက်သည်။မရင်မိလည်း ကာမစိတ်တွေပြန်လည်နိုးကြွလာပြီး သူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကြွသထက်ကြွ ရွသထက်ရွလာသည်။
စားသောက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသောစောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို ဖိနှစ်၍ သွင်းလိုက်သည်။ စောစောကပင် လီးအထိုးခံထားရပြီးမို့ အဝင်မှာထင်သလောက် မနာကျင်တော့ အရသာရှိရှိနှင့်ခံလို့ကောင်းရုံသာ။ စိုးလွင်က လီးကြီးကို တဝက်ကျော်ကျော်ပြန်နွုတ်လိုက်ပြီး ခပ်သွက်သွက် ပြန်သွင်းသည်။ ဤကဲ့သို့ လေးငါးဆယ်ချက်ခန့်စောက်ပတ်နှင့်လီးမိတ်ဆက်ပြီး ခပ်သွက်သွက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပါတော့သည်။ သူ့လက်နှစ်ဖက်က မရင်မိ၏နို့အုံကြီးကို တလုံးစီဆုတ်ကိုင်ကာ ကိုယ်ကိုကိုင်း၍အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့သည်။“ …….ဖွတ်….ဖွပ်….ဖွတ်….ပြွတ်…..ဖွတ်….ဖပ်…..ဗျစ်…ဘွတ်….ဖွတ်….ဖွတ်….” လီးနှင့်စောက်ဖုတ်ပွတ်တိုက်ရာမှထွက်ပေါ်လာသောအသံများလဥနှစ်လုံးကဖင်ရိုက်သံများဖြင့် တခန်းလုံးဆူညံသွားတော့သည်။ မရင်မိကလည်း အောက်မှနေ၍ ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကော့ပြီးခံသည်။စိုးလွင် ကလည်း ကုန်း၍ ကုန်း၍ အသားကုန်ကြုံးကြုံးပြီးဆောင့်သည်။
၁၅ မိနစ်ကျော်ကျော်ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ မရင်မိတကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို တုံခါသွားပြီး ပြီးဆုံးသွားပါတော့သည်။စိုးလွင်က မရင်မိပြီးမှန်း သိသော်လည်း မရပ်နားဘဲ ဒလစပ်ဆက်၍ ဆောင့်သည်။ ပြီးလို့ကောင်းတာကတစ်မျိုး မနားတမ်းဆက်ဆောင့်ပေးနေသည့်အတွက် စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ကျဉ်အီဆိမ့်ကာ အတားအဆီးအကွယ်အမဲ့ လေဟာနယ်ထဲသို့ လွင့်မျောနေသလိုမျိုး ခံစားရတာကတဖုံ လူပျိုသိုးတစ်ယောက်၏ လီးနုထွားကြီးကို အလိုးခံလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရတာက တစ်နည်း………. အသီးသီး မငြီးနိုင်သော ဝေဒနာတွေဆက်ကာ ဆက်ကာ ခံစားနေရပါတော့သည်။ ၁၀ မိနစ်ကျော်ကျော်လောက်အရောက်တွင် စိုးလွင်က တစ်ချီပြီးသွား၏။ မရင်မိက ခံကောင်းဆဲ……… ဤကဲ့သို့ သဲကြီးမဲကြီး အချစ်ပွဲဆင်နွဲလာရာ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်ခန့် အရောက်တွင် နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူ ပြီးဆုံးသွားကြ၏။ ပြိုင်တူပြီးလျှင် ကောင်းနိုင်ပါသည်။ မရင်မိလည်း ပျော့ခွေနွမ်းကြေသွားသည်။
သို့သော် သူမမျက်နှာမှာ အပြုံးတွေဝေလျှက်…… စိုးလွင်က သူ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆွဲနွုတ်လိုက်သည်။လီးကြီးက မာန်ထနေဆဲ ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် ဘလွတ် ဟု အသံမမြည်ဘဲ ပြွတ် ဟု အသံမြည်သွား သည်။အခြေအနေက နောက်ထပ်နာရီဝက်လောက်ဆွဲနိုင်သေးသည့်သဘောကို လက်တွေ့ပြနေ၏။ ကိုကျော်ဆွေနှင့်တိုးတိုးတို့နှစ်ယောက် စိုးလွင်ကို ကြည့်၍ အံသြနေ၏။ အချိန်အားဖြင့် တစ်နာရီ ပြည့်ရန် မိနစ် ၂၀ လိုသေး၏။နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ ထပ်ထည့်လိုက်လျှင် မိနစ် ၇၀ တစ်နာရီ ၁၀ မိနစ်…..ကိုကျော်ဆွေ စိုးလွင်ကို ရွုံးသွားပါပြီ….။ “…..ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်…..ဆွေမေ့မျိုးမေ့ပါဘဲ…..အသားတွေတောင် တုန်တယ်ကွယ်….မင်း…မိန်းမလိုးဘူးလားဟင်…” “……ဟုတ်ကဲ့….လေးဆွေသမီး…..ရီရီမွန်ကို ၅ ခါမက လိုးဖူးပါတယ်…..” စိုးလွင်စကားကြောင့် တိုးတိုးမျက်လုံးအစုံပြူးကျယ် သွားသည်။သူ့ထက်ပို၍ ကိုကျော်ဆွေ့ မျက်လုံးကြီးတွေက အဆတစ်ရာပို၍ ပြူးကျယ်သွားပါတော့သည် …… ပြီးပါပြီ။
စိတ်ထဲမှာ မျော်လင့်နေတာ ဝန်ခံမိတယ် . ဒါပေမယ့် လက်တွေကြီး ကျတော့ ကျွန်တော် စိတ်တွေ ခြောက်ချား သွားတယ် ။ ဝင့်ဝါ တဲ့ ။ လှတ ပတ ကောင်မလေး ။ ခန္တာကိုယ်က အိုးတောင့်တောင့် မဟုတ်ပေမယ့် သွယ်သွယ်လျလျလေးနဲ့ ။ ခေတ်လူငယ် ဆိုတော့လည်း အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းက ခပ်ဟော့ဟော့ ။ ဝင့်ဝါ ကိုခုမှ မြင်ဖူး သိဖူး တာလည်း မဟုတ် ။ နွေရာသီဆိုတော့ ရာသီဥတုကပူတော့ ကျွန်တော် နဲ့ မိန်းမ မေသူ ညအိပ်ယာဝင်ရင် ခြင်ထောင် မထောင်တော့ဘူး . ပူလို့. အိုက်လို့ပန်ကာလေး ဖွင့်ပြီး အိပ်ရတယ် […]